Wararka Maanta: Khamiis, May 2 , 2013-Puntland oo sheegtay inay gacanta ku hayso 18 qof oo ka tirsan Al-shabaab dhawaanna ay xukunno dil ah ku filin doonto
Wasiirka ammaanka Puntland, Khaliif Ciise Mudan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 18-ruux ay ku fulin doonaan xukunno marka ay soo xiranto maxkamadeyntooda, wuxuuna xusay in ammaanka Puntland uu ku jiro in la marsiiyo qofkii dambi-geysta sharciga.
“Puntland waxay gacanta ku haysaa 18-ruux oo ka tirsan Al-shabaab horay ayay maxkamadi u xukuntay waxayna ka qaateen rafcaan, balse mar kale ayaa qaarkood isla xukunkii hore lagu riday, kuwo kalena maxkamadda ayaa u socota, marka ay maxkamadeyntu soo dhammaantana xukunnada ayaa lagu fulin doonaa,” ayuu yiri Khaliif Mudan.
Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay in dilkii 13-kii qof ee dhawaan duleedka Boosaaso ka dhacay uu ahaa mid sharci ah, maadaama ay ka mid ahaayeen Al-shabaab ayna xukunntay maxkamad kaddib markii lagu helay dambiyadii loo haystay oo ay ka mid ahaayeen dilkii Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan.
Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in Puntland ay ka go’an tahay inay sugto ammaanka guud ee deegaannada ay ka taliso, cid walba oo lagu helo dambi ah inuu ka tirsan yahay Al-shabaab ama geysta dil lagu fulin doono xukunka lagu rido, iyadoo aan cidna loo aabbo-yeelayn.
Dhawaan ayaa ciidamada Puntland waxay toogasho ku filyeen 13-qof oo ay ku jirtay haweeney, kuwaasoo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-shabaab qaar ka mid ahna ay qirteen inay ka dambeeyeen dilkii Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan oo dhammaadkii sannadkii 2011 lagu dilay magaalada Boosaaso xili uu kasoo baxay masjid uu salaaddii subax kusoo tukaday.
Al-shabaab ayaa sheegtay inay u aar-gudi doonto dadkaas Puntland lagu dilay oo ay sheegtay in lagu dilay si garsdarro ah, iyagoo baayaankooda ku sheegay inay beegnsan doonaan, ciddii amarka bixisay, ciddii fulisay dilka iyo kuwii jaajuusay intaba.